Anhlobonhlobo abantu ikhambi zonke izinkinga, njengoba wazi, ukuphuza. Gourmet brandy esisemqoka, uquqaba aye ayisebenzisa kaningi vodka, kanye nokusetshenziswa olunzima phisa kuphela. Kukholakala ukuthi le ndlela kuyinto abandayo ngezinyawo zakhe futhi ngemva kwamahora ambalwa. Kodwa empeleni, ukuthi ungakwazi uphuze utshwala ezingeni lokushisa?
Folk ukuhlakanipha futhi aliziphikisi
Iveza isipiliyoni anqwabelene inzala zabantu, izaga kanye namazwi. Ukukhumbula izaga abadumile, ungakwazi ukufika khona esiphelweni kabi ukusebenza utshwala yezifo. Hhayi lutho bathini: "Vodka is hhayi ziphathwe, kodwa nezilima kuphela."
Nokho, umbuzo wokuthi ungakwazi uphuze utshwala ezingeni lokushisa kwenzeka ngokuphindaphindiwe. Futhi kuze kube namuhla kukhona abantu abaningi, ngubani uyaqiniseka ngokuqinile ukuthi Ikhambi elingcono kakhulu imfiva ayitholakali. Kukholakala, nakuba olunamandla sisebenza e unezimpawu ezikahle kanye nge umkhuhlane sina, lapho umuntu ngokoqobo akusho ukuvuka embhedeni.
Futhi kunalokho iphathwa?
Uma ujwayelene nabantu interview amakhambi ngempumelelo, ngokuvamile Kunconywa ukuba aphathwe vodka, okuyinto kuhlangene:
On umbuzo ukuthi ungakwazi uphuze utshwala ezingeni lokushisa, ngoba abantu abaningi impendulo inguyebo - ngabe kunomehluko umbuzo yini umthamo kuvunyelwe. Abanye basikisela ukuthatha indlela jikelele yesikhathi esisodwa, omunye gulp gulping phansi isigamu ingilazi noma ngisho lonke. Abanye belulekwa ukuba baphuze, ukuphuza ukudla encane usuku lonke. Ngokuqinisekile labo, futhi abanye bangakwazi ukunikeza izibonelo eziningi neziphakamiso ezivela ekuphileni, futhi ufakazela ukuthi bakhethe ephumelela kunazo.
Futhi okushiwo udokotela, uma cela izazi mayelana nokuthi ungakwazi uphuze utshwala ezingeni lokushisa? Impendulo okufanayo: noma kunjalo. ETHYL utshwala - asivumelani ngokuqinile anobuthi, umsebenzi inhibitory amaseli omzimba. Ngaphezu kwalokho, isiphuzo izingxenye uxhumano nomsebenzisi izinto asebenzayo of ukuthaka imithi. Ngenxa yalokho, nemithi babe ingaphumeleli, futhi emibi yawo benamandla kakhulu.
Kunoma ingozi exacerbations isifo ubeka ukuvinjelwa sanoma yisiphi utshwala. Ngeke sibe khona ngaphandle futhi umkhuhlane, kanye zonke ezihlobene nesifo sakhe.
Utshwala lapho singena igazi kuphazamisa ukusebenza kwezicubu eziyishumi nemitshingo. Umphumela onamandla ikakhulukazi:
Ngo izicubu izitho ziqala izinqubo atrophic, ukucasulwa utshwala njalo ukusetshenziswa.
Kukhona umbono, nakuba isiphuzo ngezikhathi oludakayo ngemithamo emincane ngangokunokwenzeka. Eqinisweni, ngisho inani elincane ethanol, ngokuvamile kuholela izinguquko ezingenakuhlehliswa ebuchosheni. Buthakathaka ukusebenza kwamanyikwe, nezicubu ayikho indlela yokuzivuselela kahle. Ukwakheka amaprotheni iphazamisekile, engasenamahloni zamagama abo. Nge Ukweqiwa elandayo lezisebenzi umuntu ebhekene izifo ezihlukahlukene, kanye izinkinga izinkinga zezenhlalo nezingokwengqondo.
Umangele ngesibalo ukuthi ungakwazi uphuze utshwala 37, ngokuvamile abantu ukukhumbula owaziwa kusukela ezikhathini zasendulo, ukuhlakanipha ngisho ushevu ziwusizo, uma umthamo uphansi. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi lokhu kusebenza notshwala, umbuzo omkhulu.
Ukuze sithole umphumela iziphuzo ezidakayo abantu abandayo ogulayo Kwakuseshwa zokwelapha. Wahlela kubo-University of Pennsylvania sika Carnegie Mellon University. Lo mcimbi kwenzeka ngo 1993. Inhloso enkulu kwaba ukunquma ukuthi ukumelana lomzimba amagciwane kanye nezifo luyanda, okubangela SARS, phakathi ukuphuza.
Ukuze uqonde ukuthi ungakwazi uphuze utshwala 38, futhi ukunquma inzuzo noma ukufakazela ukungezwakali kwawo, ososayensi baye wadala amaqembu amabili ngokuqashwa kwamavolontiya. Abantu abangu-390 ezimpini, phakathi kwabo kwakukhona imikhuhlane nabantu enempilo. Njengoba umthamo "zokwelapha" lalisetshenziswa 2-ounce (57 ml) - lokhu inani nogologo ngokuvamile isabelo esisodwa. Imiphumela yabonisa ukuthi uma umuntu okade umphumela iyagula "elapheke" enjalo asipheli. Nokho, baphawula ukuthi abantu enempilo kudla utshwala, aziguli ngesikhathi sokuhlolwa.
Thola uma ungakwazi uphuze umkhuhlane, izinga lokushisa, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi utshwala - lena magciwane ezinhle. Lilodwa ingilazi ngempumelelo ibulala amagciwane, amagciwane, amagciwane, izama lande nolwelwesi lwamafinyila emlonyeni. Yebo, utshwala ayikwazi iphathwa, kodwa inzuzo ekuthatheni iziphuzo eqinile etholakalayo.
Ingabe sengiphuza ezingeni lokushisa 37.5, lapho umuntu usevele ogulayo? Lapha impendulo ngokuqinile ezimbi. Uma ukutheleleka livelile, ithinta kakhulu nolwelwesi lwamafinyila: bona aluvuvukalanga babe avuvukele. ukwelashwa surface nge ETHYL utshwala kuholela izinqubo ezimbi.
iziphuzo Namandla kubangele ukuchama kaningi futhi nomthelela ukuphelelwa amanzi emzimbeni. Lokhu kuholela uketshezi ukulahlekelwa kwezicubu lwamafinyila, okuyinto babe usengozini yokuthola Amagciwane. Lapho izinga lokushisa likhuphuka, umzimba abakhahlamezwe umsebenzi amagciwane kanye ubuthi obukhishwa kubo. Izicubu, izitho zangaphakathi inzima ne ukuqeda amagciwane ayingozi kanye nemikhiqizo amagciwane imfucuza. umthwalo engeziwe ngesimo utshwala izibuko nzima isimo futhi kubambezela inqubo yokwelapha.
Yini futhi ngingasisebenzisa kanjani?
Ngakho akuhambisani ngokuphelele imiqondo - utshwala lokushisa. Kungenzeka yini ukuba umuntu aphuze vodka tekuvikela? Kuwufanele ukukhumbula konke okufanayo Paratselsovu ngokuhlakanipha: ngemithamo emincane, futhi ubuthi kungaba wusizo. Kodwa kuphela encane!
Uma umuntu yayiyisizinda abandayo, uzizwa Ukugodola noma uqaphela izimpawu zokuqala zokugula esizohlasela, angaba namandla okuwunikela esincane isiphuzo esishisayo. Nokho, wasebenzisa njengoba odokotela imithi musa batusa likagologo. Kuyinto ngempumelelo kakhulu futhi ewusizo kuka newayini elibomvu. Lokho-ke enyakaza ku itiye hot, banezela izinongo, baphuze isiphuzo ngaphambi sokulala.
50-75 ml iwayini.
Kukhethwa ikakhulu ebomvu ezomile.
Ingabe sengiphuza ezingeni lokushisa 37,2? Njengoba lokhu kumane nje kuyisiqalo loko yokugula, njengoba isilinganiso kwezidakamizwa ukusebenzisa isiphuzo elandelayo: vermouth ukufuthelana ukudambisa uju.
Kwenzeka isimanga ukuthi ezweni lethu amadoda utshwala vodka ngoba oludakayo kancane akubhekwa. Njengoba zokuvimbela kwamukelekile, nakuba hhayi Kunconywa, sebenzisa iresiphi elandelayo: 50 ml i-vodka, engeza ingcosana upelepele obomvu ashisayo, evuthayo futhi baphuze. Lutho neze umuthi wendabuko, ngokushesha ngiyolala.
Noma ingabe akukhona kunomvuzo?
Kubantu abanendaba ngempilo yabo, umbuzo ukuthi ungakwazi uphuze umkhuhlane, izinga lokushisa kubalulekile. Yiziphi izingozi ezihlobene ukwelashwa okunjalo?
Izimo zethu zihluke kakhulu abasengozini zesikhumba. Imikhumbi uvuleke, ngaleyo ndlela kwande ukugeleza kwegazi futhi umuntu azizwa efudumele. Uma lokhu isikhumba uyabaselwa, negazi, esikhundleni salokho, ikhiqiza ukushisa ngempumelelo, okuholela ukwehla kwezinga lokushisa komzimba bebonke. Lokho, ngemva kokuphuza utshwala isifo, ngaleyo ndlela umuntu kwandisa eningi kakade nokushisa, elibuye buthakathaka emzimbeni.
Khumbula ukuthi utshwala, nakuba, futhi kuyinto magciwane, ke akunamthelela amagciwane - kunzima kakhulu ukubulala. Ikakhulukazi, ziyawathinta imiphumela emibi isiphuzo umkhuhlane virus. Phuza, kunalokho, luba buthaka umzimba, okuyinto wenza sikwazi ukwenza kusebenze isifo nakakhulu. Ngokuvamile, lapho engayitholi njalo uphuzo oludakayo kanye umkhuhlane kungaholela eziyingozi.
Ngaphezu kwalokho, utshwala kuphakamisa:
uyahluleka uma elwa nokuphuza izifo ezingamahlalakhona;
izinkinga nemithambo yegazi, emithanjeni;
kokunikezwa kwe-lokushisa komzimba.
Njengoba odokotela bathi, inhlanganisela utshwala kanye abandayo - uhlobo "ingxube alufakwa", njengoba ungakwazi neze kucombela kutsi imiphumela kuzoholela impatho efanayo. Uma umzimba unamandla, kungenzeka ukugwema nemiphumela ebuhlungu, kodwa asikho isiqinisekiso. Indlela onokwethenjelwa kakhulu ukwelashwa - imithi eside lukhona, yokwamukela olawula udokotela.
Ukususa imikhaza. Amathiphu ukususa umuntu nenja
Hydrangea Pink Lady: incazelo kanye nokubuyekeza
Yeka ukuthi kuyinto ayenqaba ifa ngesikhathi ummeli olungisa izivumelwano? Article 1158 Code Civil. Ukunqatshwa ifa esivuna nabanye abantu kanye Ukuyekwa kwezindlela ingxenye ifa
Fish ezibhakwa ucwecwe kuhhavini